Isivumelwano sobulungu baseJalimane, eJalimane
Ngaphakathi kohlaka lwezimiso ozithandayo kuleli sithangami; ubulili ngokuphelele zamanga, edukisayo, nhlangano engekho emthethweni ibekela, crusher, kwephule amalungelo ubumfihlo bomuntu, umthetho wamazwe futhi uMthetho weRiphabhulikhi s Turkey \_ 'ukuthumela imilayezo namazinga okuqukethwe. Ngaphezu kwalokho, amafayela abhalwe nge-copyright nokunye okunye. izinto. Ugaxekile, izikhukhula, ukukhangisa, izinhlamvu zamaketanga, ukumaketha kweqembu nokuhlukunyezwa akuvunyelwe ngokuphelele.
Kufanele wazi ukuthi akunakwenzeka ukuthi umnini noma umphathi walesi sithangami ahlole futhi aqinisekise ukufaneleka kokuqukethwe okuthunyelwe. Sicela uqaphele lokho; asikwazi ukubuka yonke imilayezo elahliwe ngokushesha, futhi okuqukethwe kwemiyalezo akuyona umthwalo wethu. Asikwazi ukuqinisekisa ukuthi noma yiluphi ulwazi olunikeziwe / olunikeziwe luwusizo noma oluhambisanayo. Imilayezo ethunyelwe ikhombisa kuphela imibono yomlobi; hhayi imibono yesigungu, ithimba lesigungu, abalingani, noma umnikazi wesigungu. Uma unomuzwa wokuthi umlayezo othunyelwe awuphikisayo, sazise imenenja noma umengameli ngokushesha. Abanikazi besigcawu kanye nethimba banelungelo lokuthatha izinqumo ngesikhathi esinqunyiwe sokususwa kokuqukethwe okubhekwa njengokungacabangi. Sicela uqaphele ukuthi lokhu ngeke kwenzeke ukususwa okusheshayo noma ukuhlela okuyingxenye yemilayezo, njengoba lokhu kuyinkqubo yenqubo ngokuphelele. Lezi ziphinde zisebenzise ulwazi lomlando lwamalungu.
Uzobe unomthwalo wemfanelo ngemilayezo oyibhalile. Ngaphezu kwalokho, uyavuma ukuthi ungalimazi noma uvikele lesi sithangami, amanye amawebhusayithi, ithimba lesithangami kanye nabalingani abahlotshaniswa nesithangami. Abanikazi beli sithangami banelungelo lokudalula ubunikazi bakho (ngaphezu kwalokho, noma yiluphi olunye ulwazi oluqoqwe ngawe uma usebenzisa le nsizakalo) uma lithola isikhalazo esisemthethweni noma isenzo somthetho sidinga ngenxa yokuthi usebenzisa isithangami.
Unikwe inkululeko yokukhetha igama lomsebenzisi ngesikhathi sokubhalisa. Sincoma ukuthi igama lakho lihlukile kuwe futhi lifanelekile ngokufanelekile. Uyavuma ukunganiki iphasiwedi ye-akhawunti yakho yomsebenzisi ozoyibhalisa kunoma ubani ngaphandle komqondisi wezinjongo zokuphepha nokuqinisekisa uma kunesidingo. Noma kunjalo, uyavuma futhi ukuthi ungasebenzisi i-akhawunti yomunye umsebenzisi. Ngokuphepha kwe-akhawunti yakho, sincoma ukusebenzisa amaphasiwedi anzima futhi ayingqayizivele.
Ngemva kokubhalisa nokungena ngemvume ngephasiwedi yakho, uzokwazi ukungena imininingwane yakho ngokuningiliziwe. Kungumthwalo wakho wokunikeza ulwazi olunembile nolungaguquguquki. Uma abaphathi beforamu bebona ukungahambisani noma izimo ezingekho emthethweni ulwazi olunikezayo, bangase bahlele ulwazi lwakho ukulungiswa nabo noma ngaphandle kokuxwayisa. Kulokhu, ezinye izigwegwe zingasebenza.
Kufanele wazi ukuthi ikheli lakho le-IP lirekhodwa ngayo yonke imilayezo oyithumelayo. Lolu lwazi lungasetshenziswa uma udinga ukuvinjelwa ekufinyeleleni esithangamini noma ukuxhumana ne-ISP yakho. Lokhu kungenzeka uma uphula ingxenye ebalulekile yalesi sivumelwano.
Qaphela: Isofthiwe yesitoreji igcina idokhumenti yombhalo ebizwa ngokuthi ikhukhi kwisilondolozi sesiphequluli sakho equkethe ulwazi oluncane ngawe, njengegama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Lolu lwazi lisetshenziselwa kuphela ukungena ngemvume nokungena ngemvume okuphephile. Isofthiwe ayitholi idatha kusuka kwikhompyutha yakho kunoma iyiphi ifomethi ngaphandle kwalolu lwazi, futhi ayithumele idatha kwikhompyutha yakho.